SSA ဥက္ကဋ္ဌ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း | ဧရာဝတီ
SSA ဥက္ကဋ္ဌ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ဧရာဝတီ| February 16, 2013 | Hits:22,066
| | ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ RCSS/SSA ဥက္ကဋ္ဌ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့် တန်းတူညီရေးအတွက် စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက်ကို လက်နက်စွဲကိုင် တော်လှန်ခဲ့သော အင်အားကြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်များထဲတွင် တဖွဲ့အပါအဝင်ဖြစ်သည့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA) တောင်ပိုင်းသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်တွင် မဏာမ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသည်။
SSA တောင်ပိုင်းအဖွဲ့သည် ယခင်က မူးယစ်ဆေးဝါး ကိစ္စနှင့် ဆက်နွယ်ကြောင်း စွပ်စွဲပြောဆိုခံရမှုများရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးကို စီမံကိန်းရေးဆွဲ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ထို့အတူ ယခင်က သတင်းမီဒီယာ ထိန်းချုပ်မှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ် ၆၆ နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားတွင် သတင်းမီဒီယာများကို တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး ရှမ်းတပ် ခေါင်းဆောင်များက လွတ်လပ်စွာ သတင်း မှတ်တမ်း ယူခွင့်၊ ထုတ်ဖော်ရေးသားခွင့်ပြုခဲ့သည်။
SSA တောင်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရေး မဝင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ၊ နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို စောင့်ကြည်ဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ SSA တောင်ပိုင်း၏ အနာဂတ် နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု အခြေအနေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်မှု ပြဿနာများ၊ မြန်မာတပ်မတော်၊ ‘ဝ’ ပြည် သွေးစည်းညီညွှတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) တို့နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင် ဆက်ဆံရေး စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ RCSS/SSA ဥက္ကဋ္ဌ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်ကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် ကျော်ခနှင့် ဇာနည်ဝင်းတို့က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားသည်။
မေး ။ ။ ပထမဆုံးမေးချင်တဲ့ မေးခွန်းက SSA ရဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်က ဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ ရည်မှန်းချက် ၄ ချက် ချထားပါတယ်၊ အဖက်ဖက်နဲ့ ပူးပေါင်းမယ်၊ ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပြန်လည် တည်ထောင်နိုင်ဖို့ ကျိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ရှိပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ အရင်တုန်းက နားလည်ခဲ့ကြတာက ခွဲထွက်ရေးဆိုပြီးတော့ နားလည်ခဲ့ကြတယ်၊ အမှန်ကမဟုတ်ပါဘူး၊ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် ဖြစ်တယ်။
ကျနော်တို့ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ဘယ်တိုင်းရင်းသားမဆို တန်းတူညီမျှမှု လွတ်လပ်မှုရှိပြီးတော့၊ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် ပြဌာန်းခွင့်ရှိရမှာပေါ့၊ ဒါမှ ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမှာပေါ့။
ကျနော်တို့က ဒီငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်ပေါ်မှာပဲ ရပ်တည်ပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ပဲ ကျနော်တို့ ဖြေရှင်းသွားမယ်။ ဥပမာ – ကချင်ဘက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေရော အဖက်ဖက်နဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတော့ တပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်ရပ်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးဖို့လိုပြီ။ အခုခေတ် အခုအခါက အင်အားသုံးပြီးတော့ တိုက်ကြဖို့ ဖြေရှင်းကြဖို့ ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူး။ ပြည်တွင်းမှာ နှစ် ၅၀-၆၀ လောက် အပြန်အလှန် တိုက်နေပေမယ့်လည်း ပြဿနာကို ဖြေရှင်းလာနိုင်ခြင်း မရှိသေးဘူး။
ပြည်သူလူထုတွေအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ပေါ့၊ ဒီအပိုင်းမှာလည်း ကျနော်တို့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနဲ့ရော၊ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရော အဖက်ဖက်နဲ့ လက်တွဲပူးပေါင်းပြီးတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ လူနေမှုဘဝကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ပျိုးထောင်သွားမယ်။
မေး ။ ။ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်ရေး ဆွေးနွေးမှုတွေ အပေါ်မှာရော အားရကျေနပ်မှု ရှိရဲ့လား၊ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ အခု ဆွေးနွေးပြီးတော့ သဘောတူညီချက် ရတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း အကုန်လုံး အပြည့်အဝ ရတယ်ဆိုတာလည်း မရှိဘူး။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ အဖက်ဖက်နဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားဖို့ သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက် အတိုင်းပဲ လုပ်သွားမယ်။ ကျနော်တို့လည်း ကြိုးစားပြီး ဆွေးနွေးသွားမယ်၊ ကြိုးစားပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ကို ပျိုးထောင်သွားမယ်။
ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းရော၊ ဒီ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်တဲ့အပိုင်းပါ အခုဟာ အဟန့်အတားဖြစ်နေတာ တပ်မတော်ဘက်ပိုင်း၊ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးတိုင်း ပြဿနာတွေ ဖြစ်နေတာက တပ်မတော်ဘက်ပိုင်းမှာပဲ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးလာတဲ့ ၃ ကြိမ်တိုင်းပဲ။ ဒီသဘောတူညီချက်တွေကို စတင်ဖျက်တာလည်း ဒီ တပ်မတော်ဘက်ပိုင်းကပဲ။ ဥပမာဆိုရင် ဟိုမိန်း မြို့နယ်ခွဲရယ်၊ မိုင်းထား မြို့နယ်ခွဲရယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ RCSS ရဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးဒေသဆိုပြီး လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်က လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်။ နောက်ဆုံးကျတော့လည်း ပြောင်းလဲပြီးတော့ အခုချိန်အထိ မပေးသေးဘူး။
ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးတုန်းက ပြောထားခဲ့ကြတယ်၊ ဒီအပစ်ရပ်တဲ့ ကာလမှာ ကျေးလက်နဲ့ တောဘက်ပိုင်းမှာ နေမယ်၊ တပ်မတော်က မြို့ဘက်ပိုင်းမှာ နေမယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း မြို့ပေါ်တို့ လမ်းပေါ်တို့ သွားပြီးတော့ ရှုပ်တာမရှိဘူး၊ သွားတိုက်တာလည်း မရှိဘူး။ တောထဲမှာပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် နေခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲ နေမယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်အထိ တပ်မတော်ကလည်း တောထဲဝင်ပြီးတော့ နယ်မြေတွေကို အပစ်မရပ်ခင်ကတည်းကလိုပဲ လိုက်ပြီး တိုက်နေတုန်းပဲ။
ကျနော်တို့ ပြဿနာတွေ မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ ဆက်ဆံရေးရုံးတွေလည်း ၆ နေရာ ဖွင့်ထားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တပ်မတော်တွေက စစ်ကြောင်း လှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ကို အသိပေး အကြောင်းကြားတာ မရှိဘူး။ အခုဟာ ကျနော်တို့ အပစ်ရပ်ကြပြီး တပ်မတော်ကတော့ နယ်မြေစိုးမိုးရေး၊ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆိုတဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေ ထပ်လုပ်နေတယ်။ အမှန်ဆိုရင် ဒါတွေက မရှိသင့်တော့ဘူး။ ဒါတွေရှိနေခြင်းအားဖြင့် အပစ်မရပ်သေးတဲ့ သဘော ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေကြရင်လည်း တိုက်ပွဲတွေက ဆက်ဖြစ်နေကြမှာပဲ။
မေး ။ ။ SSA အနေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်တွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်နေလဲ၊ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ လုပ်ဖို့ ရည်မှန်းထားလဲ။
ဖြေ ။ ။ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်တဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့က ဒီ ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ရှိနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာတွေကို ကျနော်တို့သိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပြည်သူတွေတင် မကဘူး၊ အခုသုံးစွဲနေတာတွေက တပ်ထဲအထိ၊ ရဲတွေအထိ ရောက်နေပြီးတော့ သုံးစွဲနေကြတယ်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရကလည်း မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်တဲ့ ပေါ်လစီရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ပေါ်လစီချင်းတူတဲ့ နေရာမှာ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ အမှန်တကယ်ကတော့ ကျနော်တို့ကတော့ နိုင်ငံတော် အစိုးရကို ကူညီဖို့ပါပဲ။ သူတို့နဲ့ ပြိုင်ဘက်သွားလုပ်ပြီးတော့မှ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ဖို့မရှိပါဘူး။ မူးယစ်ဆေးဝါးကို အသုံးပြုပြီးတော့ နိုင်ငံရေး ဂိမ်းကစားတဲ့ ပုံစံလည်း မဖြစ်စေချင်ဘူး။
နိုင်ငံတော်အစိုးရက မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်တာလည်း နှစ်ပေါင်းလည်းကြာခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် သူကလည်း မတိုက်ဖျက်နိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဖက်ဖက် လက်တွဲပြီးတော့ မလုပ်ဆောင်နိုင်လို့ အခုဟာက အပစ်ရပ်တဲ့ ကာလဆိုတော့ ကျနော်တို့ကလည်း လက်တွဲပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်လို့ရတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ အကောင်အထည် ကောင်းကောင်း ဖော်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ခြင်းဖြစ်တာပေါ့။ တကယ်လို့ ကျနော်တို့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုပ်မယ်ဆိုရင် သွားလို့မရတဲ့ နေရာဆိုတာတော့ မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။
အကယ်၍ ပူးပေါင်းပြီးမှ မလုပ်ဘူး၊ သူတို့ကလည်း တဖက်လုပ်နေမယ်၊ ကျနော်တို့ကလည်း တဖက်လုပ်နေမယ် ဆိုရင်လည်း ဆန့်ကျင်ဘက် သဘောမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုသဘောမျိုး သွားဖြစ်ပြီးတော့ ပြန်လည်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးထဲမှာ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးကို တိုက်ဖျက်သွားဖို့ ရှိတယ်။ အင်အားသုံးပြီးတော့ သွားပြီး တိုက်ဖျက်တဲ့ပုံစံ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ပြုစုပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းဆိုတဲ့ နေရာမှာ ပြည်သူတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေဖြစ်မယ့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ၊ ပညာပေး လုပ်ငန်းတွေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့ ဘေးအန္တရယ် အသိပညာပေးရေး ကိစ္စတွေ လုပ်ရမှာပါ။ ကျနော်တို့ ဆွဲထားတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး စီမံကိန်းကတော့ ၆ နှစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အကယ်၍ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးလုပ်နိုင်ရင် ၆ နှစ်အတွင်း အကောင်အထည် ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ လက်တွဲပြီးတော့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု မရှိရင်တော့ ၆ နှစ်လည်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခု နိုင်ငံတော်အစိုးရက ကျနော်တို့ဆီ ပြောထားတာကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ဖို့ ကျနော်တို့ကို ပေးဖို့ ဘက်ဂျက် မရှိဘူးပေါ့နော်။ နိုင်ငံတော်ကပေးမယ့် ဘက်ဂျက်ကိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အဲဒီလောက် မတောင့်တပါဘူး။ ကျနော်တို့ လိုတာကတော့ အခုဟာ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ နေရာမှာ လွတ်လပ်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိဖို့ပဲ ကျနော်တို့ လိုလားပါတယ်။
အကယ်၍ လွတ်လပ်မှု မရှိဘူး၊ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ နေရာမှာ ဟိုလည်း သွားလုပ်လို့မရ၊ ဒီလည်း သွားလုပ်လို့မရ တပ်မတော်က လိုက်ပြီးတော့ ဖျက်နေမယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့လည်း လိုက်လုပ်လို့ မရပါဘူး။ အခုဟာ ကျနော်တို့ လိုတာကတော့ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်။ ဘက်ဂျက်ထက်ကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်လိုနေတာပါ။
နိုင်ငံတော်အစိုးရက လာပြီးတော့ တိုက်ဖျက်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ သူတို့ကတော့ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုက လျှော့ကျသွားတယ်လို့တော့ သူတို့ ထုတ်ပြန်တယ်။ အမှန်တကယ်ကတော့ လျော့ကျတာ မရှိပါဘူး။ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုက ပိုပြီးတော့ များလားတယ်။ သုံးစွဲသူတွေ ပိုပြီးတော့ များလာတာပဲရှိတယ်။
မေး ။ ။ SSA အနေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စမှာ အဓိက အခက်အခဲ တွေ့နေရတာက ဘာလဲ။
ဖြေ ။ ။ အခုက အခက်အခဲ ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့လည်း ပြောလို့မရသေးဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်တွဲ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ဆောင်တာကလည်း မရှိသေးဘူး။ ကျနော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၈/၂၉ ထဲမှာ တာချီလိတ်မှာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ အခုမှပဲ ကျနော်တို့က စပြီး ကွင်းဆင်း အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စီစဉ်နေတုန်း ရှိပါသေးတယ်။
အခု အခက်အခဲကတော့ ကျနော်တို့ သွားပြီးတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ကွင်းဆင်းပြီး လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ နိုင်ငံတော်ဘက်က ကျနော်တို့ကို လက်နက် မပါစေချင်ဘူး။ ကျနော်တို့ လုံခြုံရေးအတွက်က ဘယ်သူက တာဝန်ယူပေးမလဲ။ ကျနော်တို့ကလည်း ဒီအတွက် အခက်အခဲရှိတယ်။ လုံခြုံရေးအတွက်ကတော့ ကျနော်တို့က သေနတ်ကတော့ ပါရမှာပဲ။ ကျနော်တို့ တောဘက်တို့ ကျေးလက်ဘက်တို့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်တဲ့ နေရာမှာ ကျနော်တို့ တပ်တွေကလည်း တောထဲမှာ ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ လက်နက်ကတော့ စွဲကိုင်ထားရမှာပဲ။ အကယ်၍ သူတို့ (အစိုးရဘက်) က လက်တွဲပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်မယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့က ပါစရာလည်း မလိုဘူး။ သုံးစရာလည်းမလိုဘူး။
မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်တဲ့နေရာမှာလည်း ကျနော်တို့က မီဒီယာတွေရော ပြည်သူတွေရော လက်တွဲပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါမှလည်း မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာ အရင်းအမြစ်တွေကို လိုက်ပြီးတော့ တွေ့နိုင်မယ်။
မေး ။ ။ SSA နဲ့ အစိုးရ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ နယ်မြေသတ်မှတ်ရေးက ပါလာမယ်၊ အဲဒီ နယ်မြေသတ်မှတ်ရေး ကိစ္စဟာ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ တကယ် အခက်အခဲတခု ဖြစ်လာနိုင်မလား၊
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှ နယ်မြေသတ်မှတ်ရေးကို ဆွေးနွေးသွားရမှာ ဖြစ်တယ်။ အခုကတော့ ကျနော်တို့ သဘောတူညီချက် အတိုင်းပဲပေါ့။ ကျနော်တို့တပ်တွေက ကျေးလက်တို့ တောတို့မှာ နေပြီးတော့ အစိုးရတပ်တွေက မြို့ထဲမှာနေ ဆိုတာ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ အပစ်ရပ်တဲ့ ကာလအတွင်းမှာ၊ အကယ်၍ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း တပ်အနေနဲ့ ဘယ်နေရာမှာ နေရမလဲ၊ တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတာ ထပ်ပြီးတော့ ပါလာမှာ ဖြစ်တယ်။
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့ နေရာမှာ ကျနော်တို့က ပြည်သူတွေပါမှရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့တပ်ကပဲ နိုင်ငံရေး သွားဆွေးနွေးပြီးတော့ ပြည်သူတွေအစား သွားဆုံးဖြတ်ပေးလို့ မရဘူး။ တပ်မတော်ပဲ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးလို့ မရဘူး။ တပ်မတော်ကလည်း ပြည်သူတွေကို နားထောင်ရမယ်။
မေး ။ ။ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့် စစ်ဘေးခိုလှုံနေကြရတဲ့ ရှမ်းဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက်ကိုရော ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ အစီအစဉ်တွေရှိလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒါက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပြီးတော့ ဆွေးနွေးတဲ့ နေရာမှာ ဆုံးဖြတ်ချက် မရဘူး၊ သဘောတူညီချက် မရဘူးဆိုရင်လည်း ပြည်သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် ဒုက္ခသည်တွေ အတွက်လည်း အခုအချိန်အထိ လုံခြုံမှုဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။
မေး ။ ။ SSA နဲ့ ဆက်နွှယ်ပြီးတော့ အကျဉ်းကျနေတဲ့ အကျဉ်းသားတွေလည်း ရှိတယ်။ သူတို့ လွတ်မြောက်ရေး အတွက်ရော အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ရှိလား။
ဖြေ ။ ။ တောင်ကြီးမှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးတုန်းကလည်း ဒီအကြောင်းတွေ ကျနော်တို့ ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ကျိုင်းတုံမှာ တွေ့တော့လည်း ကျနော်တို့ ထပ်ပြောတယ်၊ ကျနော်တို့ဘက်က အကျဉ်းကျနေတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက် သူတို့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြည့်ပေးဖို့ဆိုပြီး တောင်းဆိုထားတာ ရှိပါတယ်။ စာရင်းတွေလည်း ကျနော်တို့ အကုန်ပေးထား တယ်။ သူတို့ကတော့ ကြည့်ပေးပါမယ်လို့တော့ ဖြေထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်အထိတော့ ဘာမှလုပ်ပေးတာ မရှိသေးဘူး။ အရေအတွက်အရတော့ ၅၀ နီးပါးလောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ၅၀ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဝင်တွေရော၊ ၁၇/၁ နဲ့ ဆွဲခံရတဲ့ ပြည်သူတွေရောပေါ့။
မေး ။ ။ လက်ရှိ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်မှုတွေ အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ ။ ။ အခုကတော့ တံခါးဖွင့်တုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ အထဲကိုဝင်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်တာ မရှိသေးဘူး၊ အစိုးရ လုပ်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အခုမှ စတုန်းပဲရှိသေးတယ်။ ကျနော်တို့ အပစ်ရပ်တယ်၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ဆိုတာလည်း ရှိလာပြီ။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်အထိတော့ အစိုးရကလည်း လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ပြတာတွေ ဘာတွေတော့ အသေအချာ မရှိသေးပါဘူး။
မေး ။ ။ အစိုးရနဲ့ လက်တွဲပြီး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်မှာရော ဘယ်လို သဘောထားလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျနော်တို့အနေနဲ့လည်း ယုံကြည်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီ ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ဒီမိုကရေစီကို လမ်းစ တံခါးလာဖွင့်ပေးတာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကြေညာထားတာတော့ ရှိတာပေါ့နော်၊ သူ့ရဲ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်သွားတဲ့ ပင်လုံစာချုပ် သဘောတူညီချက်အတိုင်း သူပြန်လာပြီးတော့ ပြုစုပျိုးထောင်ပြီးတော့ လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း ကျနော်တို့အနေနဲ့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။
အခုကျနော်တို့ ယုံကြည်ထားတာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တည်ထောင်ထားတဲ့ တပ်မတော်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး၊ ပြိုကွဲသွားပြီ။ အခုရှိနေတဲ့ တပ်မတော်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တည်ထောင်ထားတဲ့ တပ်မတော် မဟုတ်တော့ဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တည်ထောင်ထားတဲ့ တပ်မတော်က ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဦးနေဝင်း အာဏာသိမ်း လိုက်ကတည်းက ဒီတပ်တွေအကုန်လုံး ပျက်သွားပြီ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း တပ်မတော် ဆိုတာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တည်ထောင်လာခဲ့တဲ့ တပ်မတော် မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဒီလို ကျနော်တို့ ယုံကြည်ထားတယ်။
မေး ။ ။ မကြာသေးခင်ကတော့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်။ ဥက္ကဌတို့နဲ့ ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အဲဒီလို တွေ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဘာပြောဖြစ်မလဲ။
ဖြေ ။ ။ အပစ်ရပ်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်တွေက အကုန်လုံး တွေ့ရမှာပဲ။ မတွေ့ကြဘူးဆိုရင်တော့ နားလည်မှု မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ ယုံကြည်မှုလည်း ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ တယောက်နဲ့တယောက် အထင်မှားနေကြမယ်။ အောက်ပိုင်းကတော့ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ကျနော်တို့နဲ့ ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ ဝမ်းသာမှာပဲ။ တွေ့ဆုံလို့ရှိရင်လည်း ကျနော်တို့ပြောမယ်၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်တယ်၊ ယုံကြည်မှု မတည်ဆောက် နိုင်ရင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ တည်ဆောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
မေး ။ ။ SSA ကို တချိန်က မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပါဝင် ပတ်သက်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ စွပ်စွဲချက်တွေရှိတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာရော ဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့ အနေနဲ့ ဘယ်လို သဘောထားလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်တယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ ကျနော်တို့မှာ သက်သေတွေ အကုန်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အပြင်ကနေ ထင်မြင်ချက်တွေ ပေးနေတဲ့ ဟာတွေကရော သက်သေရှိရဲ့လား။
မေး ။ ။ SSA နဲ့ နှစ်ဖက် ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်းတွေကို ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ဖို့ရှိလဲ။ မြေမြှုပ်မိုင်း ဖော်ထုတ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော အစိုးရဘက်က ကမ်းလှမ်းလာတာတွေ ရှိနေပြီလား။
ဖြေ ။ ။ အစိုးရကတော့ မြေမြှုပ်မိုင်း ဖော်ထုတ်ရေးအတွက် ကမ်းလှမ်းလာတာတော့ မရှိသေးဘူး။ သူတို့လာပြီး ထပ်မြှုပ်နေတာတွေပဲ ရှိတယ်။
မေး ။ ။ နိုင်ငံတကာက ပြောတာတွေကြတော့ရော နိုင်ငံတကာက တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုပြောတယ်၊ မြေမြှုပ်မိုင်း မသုံးကြဖို့ပေါ့လေ၊ ပြည်သူတွေထိနိုင်တယ်ပေါ့ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ SSA အနေနဲ့ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ချင်လဲ။
ဖြေ ။ ။ မြေမြှုပ်မိုင်းက မကောင်းဘူး၊ အန္တရယ်ရှိတယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။ အဓိက ကျတာကတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ သူတို့ကရော ဂျနီဗာ သဘောတူညီချက်တွေ ဘာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော လုပ်ဆောင်မှု ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ လက်တွဲပြီး လုပ်ဆောင်မယ့်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိလား။
ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကို ထိခိုက်မှုရှိနေတဲ့ မိုင်းတွေက ၁၀၀ မှာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ အစိုးရဘက်က မိုင်းတွေချည်းပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ လ၊ ၃ လလောက်ကလည်း သီပေါဘက်မှာ ကျွဲ၊ နွားတို့ ထိခိုက်မိတဲ့ မိုင်းကလည်း နောက်ဆုံး အဖြေရတော့ တပ်မတော်ဘက်က မိုင်းတွေပဲ။
မေး ။ ။ SSA ရဲ့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အနာဂတ် ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာ ရှမ်းပြည်နယ် တခုတည်းကို ကိုယ်စားပြုဖို့ အတွက်ပဲလား။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး အတွက်ကိုရော ကိုယ်စားပြုသလား။
ဖြေ ။ ။ ဖက်ဒရယ်ဆိုကတည်းက အားလုံးကို ရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်။ အကယ်၍ ရှမ်းပြည်ကတော့ ကောင်းစားပြီး ပြည်ထောင်စုက မကောင်းစားသေးဘူး ဆိုရင် ဒါလည်း ဖက်ဒရယ် မဟုတ်သေးဘူး။
မေး ။ ။ SSA အနေနဲ့ ကလေးစစ်သား ပပျောက်ရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်အထိ လုပ်ဆောင်နေတာမျိုး ရှိလဲခင်ဗျ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ကတော့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ အသက် ၁၈ နှစ်အထက်ပဲ စစ်မှုထမ်းခွင့် ပြုထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ၆၆ နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည် အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားမှာ တပ်အင်အား ၅၀၀၀ ကျော်လောက် အသုံးပြုတာ တွေ့ရတယ်၊ စုစုပေါင်းဆိုရင် SSA မှာ တပ်အင်အား ဘယ်လောက်လောက် ရှိနိုင်မလဲခင်ဗျ။ ဖြေပြလို့ရရင် ဖြေပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ အခု စစ်ရေးအပိုင်းမှာတော့ ဖြေပေးလို့တော့ မရသေးဘူးပေါ့လေ။ အကယ်၍ နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ ဆွေးနွေးပြီဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီအချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့ ကျနော်တို့က အင်အား ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ စာရင်းပေးတော့မှာပါ။
မေး ။ ။ SSA မှာကျတော့ မဟာမိတ် ဘယ်နှစ်ဖွဲ့လောက်ရှိလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ SSA အပါအဝင် KNU (ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး) ရယ်၊ KNPP (ကရင်နီတိုင်းရင်းသား တိုးတက်ရေးပါတီ) ရယ်၊ CNF (ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး) ရယ်၊ ALP (ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးပါတီ) ရယ် ၅ ဖွဲ့ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ UWSA နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထဲ နှစ်ဘက်နယ်စပ်တွေမှာ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်။ သူတို့နဲ့ရော ဆက်ဆံရေး နောက်ဆုံးအခြေအနေက ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ ။ ။ အစပိုင်းကတော့ ကျနော်တို့ နယ်မြေပိုင်းမှာ သဘောထားကွဲလွဲတာ၊ အမြင်လွဲမှားတာတွေ ရှိနေတယ်။ သူတို့ ကျနော်တို့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တပ်သားတွေ တချို့ကို ဖမ်းဆီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်း ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အခုတော့ ကျနော်တို့ ကြားထဲမှာ အမြင်သဘောထားတွေ တော်တော်များများ ရရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ (ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေ) မရှိတော့ပါဘူး။
မေး ။ ။ ဟိုတနေ့က အစိုးရနဲ့ KIO ဆွေးနွေးပွဲမှာ SSA က ကိုယ်စားလှယ် ခေါင်းဆောင်တချို့ တက်တာတွေ့ရတယ်။ အဲဒါ ဗဟိုကနေပြီးတော့ လွှတ်တာလား။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ ဗဟိုက ပို့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ KIO ကလည်း ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေကို သက်သေအနေနဲ့ ဖြစ်စေချင်တယ်၊ ပါဝင်စေချင်တယ်။ တဖက်က ဦးအောင်မင်းကလည်း ကျနော်တို့ကို ပါဝင်သင့်ကြောင်း စာပို့ပြီးပြောတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့က ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော်က အရင်ဆက်သွယ် လာတာပါ။
မေး ။ ။ ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ရှမ်းပါတီတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရော ဘယ်လို သဘောရလဲ၊ အားရကျေနပ်မှု ရှိရဲ့လား။
ဖြေ ။ ။ ရှမ်းပါတီ ၃ ပါတီ အားလုံးကို ကျနော်တို့ အားပေးပါတယ်။ အခုဟာက သူတို့က ပြန်လည်ပြီးတော့ ပါတီတွေ စတင်ပြီး တည်ထောင်လာတဲ့ အချိန်တွေပဲ ဖြစ်သေးတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ရှမ်းပါတီတွေ အချင်းချင်းက အမြင်သဘောထား မကွဲကြဖို့၊ တိုက်ဆိုင်မှုလိုမျိုး မဖြစ်ကြဖို့တော့ ကျနော်တို့ကတော့ အကြံပြုထားတာတော့ ရှိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းပေါ်မှာ လုပ်ဆောင်သွားကြဖို့၊ ပါတီ တည်ထောင်သွားကြဖို့ ကျနော် အကြံပြုတာ ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော SSA အနေနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးရှိလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ကတော့ ပညာရေးကို အားပေးတယ်။ တဖက်နိုင်ငံတော် အစိုးရကလည်း တိုင်းရင်းသားတွေ စာပေအတွက်ကို ဖွင့်ပေးသင့်တယ်၊ အခွင့်အလမ်းပေးသင့်တယ်၊ ကျောင်းခေါ်ချိန် အတွင်းမှာ သင်ပေးဖို့ပေါ့။
မေး ။ ။ UNFC (ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ) ထဲမှာ မပါဝင်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့က UNFC ရဲ့ သဘောထားကို လေ့လာတုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေကို ဦးဆောင် အကောင်အထည် ဖော်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ဦးအောင်မင်းကို ချီးကျူးဖို့ မကောင်းဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ သူ့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်သဘောထားနဲ့ သူ့ရဲ့ ကြိုးစားမှုရော ကျနော်တို့က ချီးကျုးပါတယ်၊ ဦးအောင်မင်းကလည်း နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲသွားဖို့ ယုံကြည်မှုတွေ ရရှိနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ သူလည်း ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေတယ်၊ အာဏာပိုင်းကျတော့ ဦးအောင်မင်း သူ့တယောက်တည်းမှာ မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ တခါတလေ သူဆွေးနွေးထားတဲ့ အပိုင်းမှာ မဖြစ်လာတဲ့ အပိုင်းတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ တချို့အပိုင်းတွေကျတော့ သူလည်း သိပ်မပြောရဲတော့ တာလည်း ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ သူ့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခုနေတာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ တခါတလေ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ တကယ် သနားပါတယ်၊ သူ့အနေနဲ့ အရမ်းပင်ပန်းတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူကရှေ့လည်း သွားတယ် ဆိုပေမယ့် နောက်လည်း ပြန်ကြည့်နေရတဲ့ သဘောရှိတယ်။
မေး ။ ။ နောက်ပြန် ကြည့်နေရတယ်ဆိုတာ တပ်ကိုပြောတာလား၊ အစိုးရကိုပြောတာလား။
ဖြေ ။ ။ ဦးအောင်မင်း အနေနဲ့ကတော့ အကုန်လုံးကို ကြည့်နေရတယ်။ သူကရှေ့မှာ သွားနေတဲ့ အပိုင်းမှာတော့ ရန်သူ သိပ်မရှိဘူး။ အကယ်၍ ရှေ့မှာသွားနေတဲ့ ကိစ္စကို နောက်က အလိုမကျဘူး ဆိုရင်တော့ နောက်ကနေ ဓားနဲ့ထိုးဖို့ လူတွေက ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဦးအောင်မင်း အတွက်လည်း တော်တော်လေး အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ။
ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီးအပေါ် သူတို့အမြင်“နောက်ကျော ဓားနဲ့ အထိုးခံခဲ့ရတာ”မတရာအသင်း ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မ ပယ်ဖျက်ပေးရန် ရှမ်းခေါင်းဆောင်များ တောင်းဆိုလူအိုတွေ နိုင်ငံရေး မလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောတဲ့ ဦးခင်ညွန့်နဲ့ …နမ့်ခမ်းမြို့ပေါ်တွင် ပစ်ခတ်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> theingi tun February 16, 2013 - 1:25 pm	SSAဥက္ကဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ်ရဲ့ဖြေဆိုပုံပါးနပ်မှုတွေတွေ့ရပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ထိုက်သူတစ်ဦးပါ။
Reply	Swe htwe February 17, 2013 - 10:16 pm	I am strongly agreed to you.
Reply	Sunshine February 18, 2013 - 2:07 pm	Leader for trafficking drug business? My gosh! That’s what he is good at.
Reply	Khe Tu February 16, 2013 - 9:55 pm	နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာ အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ဒါပေမေ့ တပ်မတော်ပိုင်း၊ တပ်ပိုင်းမှာ တိုင်းရင်းသားများ ပါဝင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးမှုဟာ အကြိတ်အနယ် လုပ်ဆောင်ရလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တပ်မတော်အကြီးအကဲပိုင်း တိုင်းရင်းသားကိုမှ မယုံတာ။ နှစ်ပေါင်း(၆၀)ကျော်ပြီ။
Reply	Shwe Yoe February 17, 2013 - 3:26 pm	There are many men and women from ethnic groups who are talented in running the Union. If the government is allowing them in rebuilding the Union, I believe, the Union of Burma will flourish beautifully. They have visions and more importantly they have the ability to work it out. We have plenty of natural resources and human power. The only thing we lack today is unity. When we come together asagenuine Union, we will live in abundant world.
Reply	Flesat February 19, 2013 - 7:03 am	No way to become union. If the burma Army stille exist, and they are depend on 2008 constitutions. For the first there are lots of shit people, who sitting in parliament.
But we can work together until we have right and equality.
Reply	တခြားဖတ်စရာများ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီးအပေါ် သူတို့အမြင်